ဆန်းဝင်း (ကျောက်ပန်းတောင်း): 4/1/12 - 5/1/12
ပုပ္ပါး , Mount Popa
DatE Monday, April 23, 2012 LaveL kpg, oasis, popa4comments link this
အတွေး စိတ်ကူး မှတ်တမ်း (၁)
၁။ ဒီလမ်းစဉ်က အမှန်ကွ ။ မင်းတို့လျှောက်နေတာ လမ်းမှား လို့ ပေကပ် ငြင်းခုံရင်း အချိန်ကုန်နေမယ့်အစား .. အမှန် နဲ့ အမှားကြားကနေ.. နှစ်ဦးနှစ်ဘက် ပြေလည်အောင် ညှိနှိုင်း အဖြေရှာတတ်ဖို့ လိုတယ် (ကျေးဇူး eleven journal)
၂။ အထက်က အကြောင်းအရာနဲ့ ဆက်ပီး စဉ်းစားမိတာက နိုင်ငံရေးမှာ မှန်တယ် မှားတယ် ဆိုတာ မရှိဘူး ။ ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ့်အတ္တအပေါ် အခြေပြုလို့ ကြိတ်မှိတ် ပေကပ် မနေသင့်ဘူး ။ ကိုယ်လုပ်နေတာ အများပြည်သူ လူသား ကောင်းကျိုးအတွက် ချမ်းချမ်းသာသာ လူ့ အဆင့် တန်းမှီ နေနိုင်ရေး ဖြစ်လို့ ကိုယ့်အတ္တတွေ ဘေးဖယ်ထားသင့်တယ် ။ ပြောင်းလွယ် ပြင်လွယ် ရှိရမယ် ။
၃။ မျိုးချစ် စာရေးဆရာ တစ်ယောက်ပြောတဲ့ ပုံပြင်ကို ဘာသာရေး တရားဟောသူတစ်ယောက်က အသုံးပြု တရား ဟောတဲ့အခါ အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်မှုက အဆိုးဘက်ကို ဦးတည်သွားတယ်။ (အဓိကရုန်းဖြစ်နိုင်တယ်)
၄။ သမိုင်းဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးတခု ဖတ်မိတယ်။ ဒေါက်တာ သန်းထွန်းက ပျူတွေ ဘယ်ရောက်သွားလဲ ဆိုတာကို ပျူတွေက ဗမာအဖြစ် ပြောင်းလဲ ပြောက်ကွယ်သွားတယ်။ ပျူသည်လဲ ဗမာ . ဗမာသည်လဲ ပျူ လို့ ဆိုတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ပျူတွေ ဘယ်ရောက်သွားလဲဆို ပျူတွေ နိဗာန် ရောက်သွားကြတယ်လို့ ယူဆမိတယ်။ ပျူလူမျိုးဆိုတာ ကျွန်တော်တို့၇ဲ့ ဘိုးဘေး ဘီဘင်တွေပါ ။ ဘာသာတရား အလွန်ကိုင်းရှိုင်းပြီး အစားသောက် အလျံပယ် ပေါများတဲ့ ပဒေသဘင် ခေတ်မှာ နေထိုင်ကြတယ်။ ဘုရားသွားကျောင်းတက် လိုက် စိုက်ပျိုးထွန်းယက် လုပ်စရာရှိတာ လုပ်လိုက်နဲ့ အကုသိုလ် အလုပ် အလွန် နည်းပါးလှတယ်။ လောဘ နည်းမယ် ဒေါသနည်းမယ် ။ အဲတော့ ကုသိုလ် ရကြောင်း တရားနဲ့သာ နေထိုင်ရင်း ပျူတွေ နိဗာန် ရောက်ကုန် ကြပါတယ် ။ (ကျွန်တော် စိတ်ကူး)
၅။ နိုင်ငံရေး ဆောင်းပါး တခုဖတ်ရတယ်။ ငွေကြေးပိုင်ဆိုင်မှု အတော် ကြောက်မက်ဖွယ် ကောင်းတယ်။ အခုလက်ရှိ အနေထားမှာ အမေရိကန်က မြန်မာ အစိုးရကို ဝင်လုံးနေတယ် ။ မဟာဗျူဟာ မြောက်တဲ့ ကုလားနဲ့ တရုတ်ကြားကို ခြေကုတ်ယူချင်နေတယ်။ အဲတော့... ပြည်သူတွေ ကောင်းစားဖို့ အလုပ် တကယ် လုပ်သူ လိုနေပါတယ်။ တကယ်လို့များ .. ပုစိန်ရိုးက ရဲတင်းရိုးဖြစ်လာရင်.. နောက်တခု ပုစိန်ရိုးကို ဆန့်ကျင်သူက .. သူကိုယ်တိုင် ရဲတင်းရိုးလောက် ဖြစ်မယ်ဆို သဘောတွေ့ချင် တွေ့နေမယ် ။ အဲလိုသာဆို ပြည်သူတွေ ပုစိန်ရိုးထက် ရဲတင်းရိုးကို အလွန်ကြောက်ရပါလိမ့်မယ် ။ နားလည်လား ။ အရင်းရှင် အာနာရှင်ဆိုတာ သူတို့ အချင်းချင်းသာ ပေါင်းချင်ကြတာလေ။ ယူအက်စ် ဆိုတာ အမြဲတန်း ဆင်းရဲသားတွေအတွက် လုပ်ပေးနေတယ်များ ထင်သလား မှားမယ်ဗျာ ။
DatE Sunday, April 22, 2012 LaveL အတွေး စိတ်ကူး မှတ်တမ်း2comments link this
မုဒိတာ လူမှုကူညီရေးအသင်း - ကျောက်ပန်းတောင်း
မုဒိတာ လူမှုကူညီရေးအသင်း - ကျောက်ပန်းတောင်း ...
ချမ်းသာဆင်းရဲ မခွဲတူတူ နှလုံးလှဖြင့် သုခပေးဝေ ဒုက္ခပြေအံ့ ....
DatE Saturday, April 07, 2012 LaveL kyaukpadaung, မုဒိတာ, မွေးရပ်မြေ0comments link this
NLD party won 2012 April 1 election
Myanmar's National League for Democracy party won 2012 April 1 election. US president Obama watched the news of Daw Aung San Su Kyi and got happiness for future of the tow countrys and the world ...
DatE Saturday, April 07, 2012 LaveL ရေးချင်တာရေးသည်0comments link this
၁ ။ ကျောက်ပန်းတောင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် တွင် NLD မှ ဒေါက်တာ ဇော်မြင့်မောင်နှင့် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီမှ ဦးအောင်ဝင်းကြည်တို့ ၀င်ရောက်အရွေးခံကြတယ် .
၂ ။ သာယာအေးရပ်ကွက် ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ အရက်မူးပြီး မဲဆန္ဒရှင်များနှင့် စကားများပြီးနောက်
၎င်းအား မြို့နယ်ကော်မရှင်က ရာထူးမှ ထုတ်ပယ်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
၃။ အင်တောရွာတွင် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီက မဲဆွယ် သီချင်းများကို အသံချဲ့စက်များနှင့် ဖွင့်နေ ကြောင်း သိရသည်။
ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေအရ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပသည့်နေ့တွင် မည်သည့်ပါတီမှ ပါတီသီချင်းဖွင့်ခြင်း၊ မဲဆွယ် စည်းရုံးခြင်းများ ပြုလုပ်ခွင့် မရှိဟု ထုတ်ပြန်ထားသည်။
၄။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဘာသာရေးကို အသုံးချ မဲရယူဖို့ ကြိုးစားမှု တခုဖြစ်ပွားခဲ့ ။
၅။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လာရောက်မည့် အစီအစဉ် ကျန်းမာရေးကြောင့် ဖျက်သိမ်းလိုက်ရ ။ မတ်လ 29 ရက် 30 ရက် ညနေပိုင်း ဆုတောင်းပြည့် မဟာစေတီကြီးမှာ စုပေါင်း ဆုတောင်းပွဲကျင်းပ NLD အင်းအားပြခဲ့ ။
၆။ ကျာက်ပန်းတောင်း DR.ဇော်မြင့်မောင် (NLD) - မဲရုံ ၃၈၃ ရုံရှိသည့်အနက် ၃၆၀ ခန့်တွင် အနိုင်ရနေဟု သိရ ။
၇။ နေပြည်တော်မှ ကျောက်ပန်းတောင်းသူ ကျောက်ပန်းတောင်းသား နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ ဇာတိမြေ ပြန်ကာ ဆွေမျိုးတော်သော ကြံခိုင်ရေး အမတ်အား မဲမပေးဘဲ ... NLD အားမဲပေးကြာင်း သိရ။
၈။ မိသားစုအလိုက် မဲစာရင်းကျန်ခဲ့လို့ မဲမပေးရခြင်း ။ သေဆုံးသူများ မဲစာရင်းတွင်ပါရှိနေသောကြောင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစုမှ ဒေါသထွက် အပြစ်တင်ခြင်း .. ဘယ်ပါတီမှ မဲမပေးဘဲ ကြားနေများရှိကြောင်းလဲ သိရ ။
DatE Friday, April 06, 2012 LaveL kpg, kyaukpadaung 1 comments link this
ဇာတိမြေမှာ အာစရိယ ပူဇော်ပွဲ ရှိတယ် ။
DatE Thursday, April 05, 2012 LaveL မွေးရပ်မြေ0comments link this
ပုပ္ပါး mount popa တောင် ကို ဒီလို မြင်ကွင်းကနေ ရိုက်ယူထားတဲ့ ဓာတ်ပုံက ရှားရှားပါးပါးပဲ.. စိမ်းလန်းစိုပြေ တဲ့ အိုအေစစ်လေး ထာဝရ တည်နေပါစေ ။ တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများအတွက် ဘိလပ်မြေ ထုတ်လုပ်ခြင်းကြောင့် အိုအေစစ် ပြောက်ကွယ်သွားမှာ စိုးရိမ်ရတယ် ။ အိုအေစစ် ကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ကြစို့ ။
DatE Thursday, April 05, 2012 LaveL kyaukpadaung, oasis, popa0comments link this
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အတွက် အမြန်ဆုံး ကျန်းမာလာစေရန် စုပေါင်း ဆုတောင်းပွဲ
ကျောက်ပန်းတောင်း မြို့နယ် .. မဟာစေတီကြီး စေတီ တွင် 29 / 03 / 2012 နေ့နှင့် 30 / 03 / 2012 ညနေများတွင် လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အတွက် အမြန်ဆုံး ကျန်းမာလာစေရန် စုပေါင်း ဆုတောင်းပွဲ ကျင်းပခဲ့ ။
DatE Thursday, April 05, 2012 LaveL kpg, kyaukpadaung0comments link this
ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်(ကိုယ်ရေး ရာဇဝင် အကျဉ်း)
နိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံ - ၁၉၈၈ မန္တလေးဆေးတက္ကသိုလ် သပိတ်ကော်မတီတွင် အတွင်းရေးမှူး၊
အထက်မြန်မာနိုင်ငံ ဆရာဝန်များ သပိတ်ကော်မတီတွင် တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် လုပ်ဆောင်ခဲ့။
၁၉၉၀ တွင် အမရပူရ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ယှဉ်ပြိုင်ပြီး အနိုင်ရခဲ့။
ယင်းနှစ်တွင် ပုဒ်မ ၁၂၂(၁)အရ ထောင်ဒဏ် ၂၅ နှစ် ချမှတ်ခံရပြီး ၁၉၉၃ တွင် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အရ ၁၀ နှစ် သို့ပြောင်းခဲ့။
၂၀၀၉ တွင် ထောင်မှ လွတ်မြောက်ပြီးနောက်
မန္တလေးတိုင်း စည်းရုံးရေး အဖွဲ့ဝင်၊ ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ။
DatE Thursday, April 05, 2012 LaveL kyaukpadaung0comments link this
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အတွက် အမြန်ဆုံး...
ကျောက်ပန်းတောင်း မြို့နယ် ရပ်ကွက်များ၏ မဲစာရင်းမျာ...